Farmaajo iyo qaar kamid ah Madaxda maamul goboleedyada oo go’aan isla qaatay | Allbanaadir.com
Home NEWS Farmaajo iyo qaar kamid ah Madaxda maamul goboleedyada oo go’aan isla qaatay
Farmaajo iyo qaar kamid ah Madaxda maamul goboleedyada oo go’aan isla qaatay
Waxaa xalay xarunta Madaxtooyada Soomaaliya kulan albabaabada u xirnaayeen ku qaatay Madaxweynaha mudo xileedkiisu dhamaaday , Ra’isul Wasaaraha xil-gaarsiinta iyo madaxda maamul goboleedyada ee Dowlada federaalka taabacsan.
Kulanka ayaa sida aan wararka ku helnay looga tashanayay shirka la filayo in maanta ka furmo teendhada Afisiyooni ee kutaala xeendaabka Garoonka Aadan Cadde, halkaas ay isugu imaanayaan Madaxda DF iyo kuwa dowlad goboleedyada.
Madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday Farmaajo ayaa la sheegay in Madaxda maamul goboleedyada taabacsan iyo gobolka Banaadir ka codsaday in isku go’aan noqdaan ayna raacaan talaabo kasta oo DF qaadeyso.
Madaxda maamul goboleedyada taabacsan Dowlada federaalka ayaana dhankooda ogolaaday in raali ka yihiin ayna ku daba feelsan yihiin Farmaajo lana qaadanayaan go’aan kasta uu isagu rabo.
Gabo gabada shirka ayaana la sheegay in Madaxda Dowlada federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada taabacsan meel isla dhigeen go’aano iskuna raaceen in hal ajando la tagaan shirka si uga adkaadaan madaxda maamulada Puntland iyo Jubbaland oo ka aragti duwan.
Previous articleNew wave of Somali youth embark on dangerous border crossings in search of better future Radio Ergo
Next articleRabshado khasaaro dhaliyay oo ka dhacay magaalada Bristol (Daawo Sawirada)